Akuku Nduku Canada Na Upswing Post Pandemic - Potatoes News
Sọnde, Septemba 19, 2021
Nkpuru osisi nduku Canada na ọdachi na-efe efe
Nri nduku nke Canada kwesiri ibu ibu n'afọ a na-eso ọdịda oke
N’inwe ọchịchọ ịlaghachi ka ọrịa zuru oke COVID-19 zuru ụwa ọnụ na-abịa na njedebe, a na-atụ anya na mkpụrụ nduku Canada ga-abawanye afọ a. Weather nwere ike ịbụ a na-ekpebi ihe n'agbanyeghị na otú nnukwu ihe ikpeazụ ihe ubi bụ.
“Ana m eche na anyị nọ n’ebe ka mma karịa ka anyị nọ. Anyị nwere nchegbu n'ezie na mbido ịkọ ihe na Western Canada, "Kevin MacIsaac, onye isi njikwa nke United Potato Growers of Canada (UPGC), kwuru na mkparịta ụka ekwentị na etiti June. Dabere na ihe m na-ahụ site na mmiri ozuzo nke batara n'ime izu abụọ gara aga, anyị nọ n'ọnọdụ ka mma, anyị nwekwara mmiri na mmiri ndị ahụ. Ma ọzọ, oge ịkọ a toro ogologo, anyị nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi wee nweta ihe ọkụkụ ahụ. ”
Akụkọ gbasara ihu igwe dịgasị iche iche na mba ahụ, na ọnọdụ akọrọ na ọdịda anyanwụ na ọnọdụ ka mma na Maritimes. Ọ bụ ezie na mmiri zoro gafee Prairies ndị ahụ kemgbe a kụrụ ya, ọdọ mmiri ndị na-agba mmiri ka na-agbada nke nwere ike ịkpata nsogbu ọzọ. N’oge ọwụwa na-eso ọnọdụ ọkọchị n’afọ 2020, udu mmiri dị mma mere ka enwee ike ideju mmiri ala dị larịị malite mbido 2021. Agaghị ewepụta nọmba ọnụọgụ ikpeazụ rue etiti ọnwa July site na Statistics Canada, ma na-atụ anya na a ga-enwe ihe ubi ka ukwuu n'afọ a karịa nke ikpeazụ. UPGC na-ebu amụma acres ga-ebili site na ọ dịkarịa ala, pasent 2.3, mgbe North American Potato Market News na-akpọ mmụba dị 4.3.
Ọnọdụ ihu igwe
Gburugburu Canada, ndị na-akụ nduku na-eche ọtụtụ nsogbu sitere na ọkọchị na okpomọkụ. Na Prairies ogbugba mmiri n'ubi usoro agbanwuru na mbụ karịa nkịtị dị ka spuds e kụrụ n'ime ala akọrọ. Ezigbo mmiri ozuzo na May emeela mgbanwe. “Anyị na-na na na ntoputa ma eleghị anya, ụbọchị ole na ole. Ma na okpomoku nke anyi nwere kemgbe ha putara, echere m na (ihe nduku na-eme) na-enwe ezigbo agam n’ihu, ”ka Dan Sawatzky, onye isi oru ndi Keystone Potato Producers Association na akowa n’ajụjụ ọnụ ekwentị.
N'oge oyi niile, ubi Manitoba hụrụ naanị pasent 40 ruo 60 nke mmiri mmiri kwesịrị. Ala mmiri na-agbada ala na Sawatzky na-ekwu na mmiri mmiri na-abịa n'oge a ga-adị mkpa n'oge ọkọchị. Ọtụtụ ọdụ mmiri mmiri dị na Manitoba bụ ndị Assiniboine Delta Aquifer na-enye nri - nke a enyela ohere imepe mmiri ma mejupụta mmiri. Ndị ọzọ na-eri mmiri site na mmiri iyi, ọkachasị na mpaghara Carman, Winkler, nke na-enwebeghị ike ijuju.
“Somefọdụ ndị na-akụ ahịhịa nwere ike ịtụ pipụ n’ebe dịtụ anya iji nwaa iju mmiri ha site na ụfọdụ iyi ndị a na-esi n’ime mmiri gafee. Yabụ, enwere ike ijide ntakịrị mmiri ahụ n'okpuru ikike, ”ka Sawatzky na-ekwu. N'ebe ugwu Alberta, afọ abụọ gara aga emeela mmiri maka ala mmiri dị mma. Akụkụ ndịda nke mpaghara ahụ na-echekwa ọnọdụ ịkpọ nkụ yiri Manitoba. Na ihe ọkụkụ dị na British Columbia na-adị mma na Warba poteto ugbua na-aghọrọ ma ree ya.
Na Ontario na Quebec akuku bidoro na mbido. Ọ bụ ezie na ọnọdụ ịgha mkpụrụ bụ nke kachasị mma, ntu oyi wakporo ọtụtụ mpaghara na Mee. Imirikiti agbakeela kemgbe ahụ mana ụfọdụ na-achọ mmiri ozuzo. Na Maritimes, akuku nduku gara nke ọma na ihe ubi na-apụta dịka izu nke atọ nke June.
“Ihe ubi kụrụ n’ime ala n’oge kwesịrị ekwesị. Ma ọ bụ ezigbo ọnọdụ, ezi ala temps, ezigbo mmiri mmiri, anyị na-aga ka a ezigbo mmalite. Ma anyị nọ naanị na ụkwụ mbụ nke ọsọ ahụ, "Greg Donald, onye isi njikwa nke Prince Edward Island Potato Board, na-ekwu. N'afọ gara aga, oge na-eto eto bụ ihe ịma aka na ọnọdụ akọrọ. Mmepụta nduku na agwaetiti ahụ dara n'ihi ụkọ mmiri ozuzo ahụ, ebe ndị na-akụ New Brunswick na-ata ahụhụ otu ihe ahụ.
Donald na-akọwa, sị: "N'ihi oge oyi anyị nwere, enweghị ntu oyi mgbe mmiri gbazee ma mmiri udu mmiri apụ n'ihi na enweghị ntu oyi, oke mmiri ahụ gbadara n'ala ka ọ ghara ịgbapụ," ka Donald na-akọwa. Akụkọ sitere na Ngalaba Na-ahụ Maka Gburugburu, PEI na Ọnọdụ Ihu Igwe na-egosi ọkwa mmiri ala ka emejupụtara mgbe ụkọ mmiri ozuzo ahụ gasịrị. Donald na-ekwu na ha nọ na ọkwa dị mma karịa na mmalite nke oge ntorobịa 2020.
Nduku oru acreage mmebi
Gbaso ọchịchọ dara na 2020 n'ihi ọrịa mgbasa COVID-19, mpịakọta nkwekọrịta abawanyela na ọtụtụ ndị na-eto eto Canada na-anata ntakịrị ọnụego, MacIsaac na-ekwu. Na nloghachi nke ihe omume ndụ na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ acrossụ gafee kọntinent na-emeghe fries fries na-achọ. N'elu nhazi nhazi a na nso nso a na osisi gafee mba ahụ, nwere mkpa dị ọkụ. MacIsaac na-atụ anya na Canada chọrọ ihe dịka 8,500 karịa acud nke spuds iji mezuo ọrụ nhazi.
Ugbo nduku a kụrụ na Borden-Carleton, PEI Canada
Ihe a na-achọ mgbapụta arị elu n'oge ọrịa a ebe ndị mmadụ na-anọ n'ụlọ wee tụgharịa na -eche nri. Mpịakọta nkwekọrịta maka ibelata poteto na Canada yiri nke afọ gara aga, MacIsaac na-ekwu. Maka nduku ohuru enwere mgbanwe site na uhie rue poteto edo edo edo. Nke a kwekọrọ na ngbanwe buru ibu nke na-eme n'ofe North America, ndị na-eweta ihe na Crop Transition Conference, nke emere na mmadụ na ọ fọrọ nke nta na Fargo, ND na June 14 kwuru. N'ozuzu a na-acho acreage ohuru ohuru igbanwe otutu site na afo gara aga, MacIsaac na-acho anya.
Ubi nduku Canada na oria ojoo ojoo
Tags: Canadausoro ogbugba mmiri n'ubiPEINduku potetoakuku nduku
Ndị na -akụ nduku Idaho nwere ihe nkwado maka ihe ọkụkụ na -adịghị mma n'etiti ụkọ mmiri ozuzo, okpomọkụ
Nde ise n'arọ nke poteto a na -ereghị ere na agwaetiti Canary
"Poteto ụtọ gburugburu afọ site na US, ruo mgbe ewepụtara ihe ọkụkụ ọhụrụ"
Mbupụ nduku US na -agbake na Afọ Ahịa 2020/21
Mmetụta Okpomọkụ na nkụ na -amịpụta mkpụrụ na Southern Idaho
Ugwu mmiri nke North Italy na-akwụ ụgwọ n'ihi ụkọ mmiri
04Ọkt(Ọktoba 4)8: 59 am08(Ọktoba 8)8: 59 pmAgroprodmash Moscow 2021
AGROPRODMASH bụ ihe ngosi mba ụwa maka akụrụngwa, teknụzụ, akụrụngwa na ihe eji arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nhazi nri. N'ime ihe karịrị iri afọ abụọ, ọ bụ ihe ngosi dị irè nke
AGROPRODMASH bụ ihe ngosi mba ụwa maka akụrụngwa, teknụzụ, akụrụngwa na ihe eji arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nhazi nri.
N'ime ihe karịrị afọ iri abụọ ọ bụrụla ihe ngosi dị mma nke azịza kacha mma n'ụwa nke ụlọ ọrụ nhazi nri Russia na -emezi.
AGROPRODMASH bụ ngwa ọrụ mmepe azụmahịa gị zuru oke:
ngwọta teknụzụ kachasị mma maka nhazi nri
sistemu nri akpaaka dị elu
ihe nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ, akụrụngwa na ọrụ
Teknụzụ na-anaghị ekpofu ihe gburugburu ebe obibi
AGROPRODMASH bụ ihe ngosi Russia na -eduga na ụlọ ọrụ nri: akụrụngwa na akụrụngwa* mpaghara niile:
ọnụ ọgụgụ nke ndị ngosi na ndị ọbịa
ọnụ ọgụgụ mba ndị na -egosi ihe
AGROPRODMASH bụ ebe nzukọ kwa afọ maka ụlọ ọrụ Russia na ndị mba ọzọ nwere mmasị na teknụzụ dị elu, akụrụngwa, akụrụngwa na ngwa maka ụlọ ọrụ nhazi nri.
4 (Mọnde) 8:59 ụtụtụ - 8 (Fraịde) 8:59 mgbede
05Ọkt(Ọktoba 5)9: 01 am07(Ọktoba 7)9: 01 pmMkpụrụ Mma 2021
A maara mkpụrụ osisi na -adọta 2021 dị ka mba ụwa yana ikpo okwu, ebe ị nwere ike n'otu ebe chọta ihe ọhụrụ ma mụtakwuo banyere
A maara mkpụrụ osisi na -adọta 2021 dị ka mba ụwa yana ikpo okwu, ebe ị nwere ike n'otu ebe chọta ihe ọhụrụ ma mụtakwuo banyere ihe ọhụrụ dị n'ọhịa.
Ihe ngosi a ga -eme na IFEMA Feria de Madrid site na 5th ruo 7th nke Ọktọba ma nabata ndị ngosi ihe ngosi 2000 na ihe karịrị ndị ọbịa azụmahịa 95 000, na -anọchite anya mba 140.
Ntinye mkpụrụ osisi 2021 bụ nzukọ teknụzụ dị elu nke nwere ike iwepụta puku kwuru puku, bulie mmata nke ụlọ ọrụ ma gosipụta ngwaahịa ha n'etiti ọtụtụ puku ndị na -azụ ahịa, ndị na -ekesa na ndị ahịa.
Nke a na -eme ka mmemme ahụ bụrụ nnukwu netwọkụ ọkachamara ọkachamara n'ụwa niile ọkachamara na ngalaba mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Ihe ngosi a ga -eweta ọtụtụ mpaghara a na -arịọkarị site na mpaghara:
Akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi ọhụrụ
Osisi na ngwa nri
Mmepụta Bio na wdg.
5 (Tuesday) 9:01 nke ụtụtụ - 7 (Tọzdee) 9:01 mgbede
28Ọkt(Ọktoba 28)9: 03 am30(Ọktoba 30)9: 03 pmMgbakọ Mgbakọ Ọhụrụ PMA & Ngosipụta 2021
Na Mgbakọ PMA Fresh Summit & Expo karịa ndị 20,000 sonyere na ngwaahịa ọhụrụ ụwa niile na agbụ ifuru na -agbakọ iji mụta, netwọkụ, wulite mmekọrịta,
Na Mgbakọ PMA Fresh Summit & Expo karịa ndị 20,000 sonyere na ngwaahịa ọhụrụ ụwa niile na agbụ ifuru na -agbakọ iji mụta, netwọkụ, wulite mmekọrịta na ịzụ ahịa.
28 (Tọzdee) 9:03 nke ụtụtụ - 30 (Satọde) 9:03 pm
Ernest N. Morial Center Convention 900 Ogige Mgbakọ Blvd New Orleans, LA 70130 United States
Emepụtara starch starch na Denmark na ụlọ ọrụ mmepụta ihe kemgbe 1900.
Ubi Ubi-nkpuru Mgba- ihe ịga nke ọma